ထာဝရတည်မြဲသော ကလေးဘဝရဲ့ အမှတ်အသားသုံးခု - Lifestyle Myanmar
ထာဝရတည်မြဲသော ကလေးဘဝရဲ့ အမှတ်အသားသုံးခု
ရာသီခွင်အရ ကိုယ့်ရဲ့အိပ်ခန်းလေးကို ဘယ်လိုအလှဆင်မလဲ?
အသည်းကွဲပြီးနောက် လူတွေထပ်မံသိရှိသွားသော အရာများ
တစ်ခြားလူတွေထက် သင့်ဟာ ပိုစမတ်ကျသူ/ဉာဏ်ရည်မြင့်မားသူဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြနေသော မမျှော်လင့်ထားတဲ့လက္ခဏာာ (၉) ချက်
ဘေဘီလေးတွေက အမိဝမ်းထဲမှာ ဘယ်လိုသင်ယူနိုင်သလဲ? သူတို့ကိုကူညီဖို့ နည်းလမ်း (၄)ခု
Melatonin (မယ်လတိုနင်)ဟော်မုန်းရဲ့ အရေးပါပုံ
LALISA Solo Concept နှင့် Group Style ကြားက မတူကွဲပြားမှုတွေကို မျှဝေခဲ့သော BLACKPINK အဖွဲ့ဝင် Lisa
သင့်ဘဝမှာ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသော မိဘတွေကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရကြောင်း သက်သေပြနေသော အမူအကျင့်များ(၈) ချက်
သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ကို ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်း (၅)ချက်
Germini (မေထုန်ရာသီဖွား) တစ်ယောက်ရဲ့ အပျက်သဘောဆောင်ပြီး ကြောက်စရာကောင်းသော အမူအကျင့် (၁၀) ချက်
ကလေးဆန်တဲ့လက်တွဲဖော်နဲ့ ဆက်ဆံဖို့ နည်းလမ်း (၉)ချက်
စကားလုံးတွေမပါဘဲ သင့်ရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို လိုချင်နေသော ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ လက္ခဏာများ(၇) ချက်
ထိခိုက်ခံစားလွယ်လွန်းသူတစ်ယောက်နဲ့ ချိန်းတွေ့မိရင် သင်သိထားဖို့ လိုအပ်တဲ့ အချက် (၇)ချက်
in Family, General Knowledge, Lotaya
ကလေးဘဝဆိုတာ လှပသော ဝိရောဓိတစ်ခု ဖြစ်ပျက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ သတိတောင်မထားမိဘဲ ကျွန်မတို့ဟာ အချိန်အတိုဆုံးကာလမှာ အခိုင်မာဆုံးအုတ်မြစ်ကို တည်ဆောက်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ အသက် ၄နှစ်မှာ ကျွန်မတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုနည်းလမ်းက ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဲ့အချိန်ကစပြီး ကျန်တာအားလုံးက ကျွန်မတို့ဘဝရဲ့ ပထမဆုံးနှစ်တွေမှာ စုဆောင်းခဲ့တဲ့ အီနားရှားကို တိုးတတ်စေဖို့ (သို့) ထိန်းထားဖို့ပါပဲ။
ကလေးဘဝမှာ ထာဝရတည်မြဲသော အမှတ်အသားတွေ ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့က ကျွန်မတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ အခြားသူတွေအပေါ်ထားရှိတဲ့ သဘောထားတွေမှာ အဓိကရောင်ပြန်ဟပ်တဲ့ ဖျောက်ဖျက်မရသော ခြေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဒီခြေရာအချို့က ကလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ ကြီးမားတဲ့ သက်ရောက်မှုကြောင့် ပိုတည်မြဲပြီး လေးနက်ပါတယ်။
” ကလေးတွေကို ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက သူတို့လေးတွေကို ပျော်ရွှင်စေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်” -Oscar Wilde-
ဒါကတော့ ကျွန်မတို့ ဘယ်တော့မှ ဖျောက်ဖျက်မရနိုင်တဲ့ ငယ်စဉ်ဘဝ အမှတ်အသားသုံးခုအကြောင်းပါ။
၁။ ကလေးဘဝနောက်ပိုင်းမှာ ယုံကြည်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ခြင်း
ကလေးတွေဟာ သူတို့မိဘတွေ (သို့) အုပ်ထိန်းသူတွေရဲ့ သစ္စာဖောက်ခြင်းကို ခံရတဲ့အခါ( ဒါမှမဟုတ်) အကြိမ်ကြိမ်အခါ စိတ်ပျက်မိတဲ့အခါ အခြားသူတွေနဲ့ သူတို့ကိုယ်သူတို့တောင် ယုံကြည်ဖို့ ခက်ခဲလာနိုင်ပါတယ်။ အခြားသူတွေနဲ့ ရင်းနှီးသော ဆက်သွယ်မှုကို တည်ထောင်နိုင်ဖို့အတွက် သူတို့ဟာ အယုံအကြည်မဲ့တဲ့ သဘောထားကို ဆန့်ကျင်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ လူကြီးတွေက သူတို့မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့အရာတွေ၊ မဖြည့်ဆည်းပေးချင်တဲ့ အရာတွေကို ကတိပေးတဲ့အခါ ကလေးအား စိတ်ပျက်စေပါတယ်။ ကလေးတွေအတွက် သူတို့ပန်းတိုင်တစ်ခုကိုရောက်ရင် ကတိပေးထားတဲ့အရုပ်ကို လက်ခံရရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ယုံကြည်မှုကို ချိုးဖောက်ခြင်းက သတိမပြုမိလို့ပဲဖြစ်စေ၊ လူကြီးတွေအတွက် အရေးမပါလို့ပဲဖြစ်စေ၊ ကလေးတွေအတွက်တော့ သူတို့က ရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆီကနေ နေရာတိုင်းမှာ ဘာမျှော်လင့်နိုင်သလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ သင်ခန်းစာတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။
ကလေးတွေဟာ သူတို့မိဘတွေ လိမ်ညာတာကို သတိပြုမိရင် စကားလုံးက တန်ဖိုးမရှိတာကို သိလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် သူတို့က အခြားသူတွေကို ယုံကြည်ဖို့နဲ့ ကိုယ့်စကားကိုယ် အဓိပ္ပာယ်ရှိအောင် ကြိုးစားဖို့ ခက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီအမှတ်အသားက သူတို့ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုအတွင်းမှာ အခက်အခဲတွေကို ဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။ အခြားသူတွေနဲ့ နှောင်ကြိုးတည်ဆောက်ရာမှာ၊ လုံခြုံတယ်လို့ ခံစားရတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ စစ်မှန်သော ရင်းနှီးမှုကို ဖန်တီးဖို့ manage လုပ်ရာမှာ ခက်ခဲသွားပါလိမ့်မယ်။
၂။ စွန့်ပစ်ခံရမှာကို ကြောက်ခြင်း
အထီးကျန်မှု၊ လျစ်လျူရှုမှုကိုခံစားရတဲ့ (သို့) စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံရတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဟာ အထီးကျန်ခြင်းက လုံးဝ negative ဆန်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုလို့ စပြီး ယုံကြည်သွားပါတယ်။ သူတို့က အခြားသူတွေအပေါ် အလွန်အမင်းမှီခိုလာတာမျိုးဖြစ်စေ၊ သူတို့နှင့်အတူရှိနေ, ကာကွယ်ပေးနေမယ့် သူတစ်ယောက်ကို အဆက်မပြတ်ရှာဖွေတာမျိုးဖြစ်စေ(ဒါမှမဟုတ်) စွန့်ပစ်ခံရမှာကြောက်တဲ့အတွက် အပေါင်းအဖော်အားလုံးကို ငြင်းပယ်တာမျိုးဖြစ်စေ သူတို့ဟာ လမ်းကြောင်း နှစ်ခုအနက်မှ တစ်ခုကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
မှီခိုရာလမ်းကြောင်းကို လျှောက်တဲ့သူတွေဟာ အထီးကျန်မှုကို မခံစားရသရွေ့ ဘယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမျိုးကိုမဆို သည်းခံနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ သူတို့က အထီးကျန်ခြင်းကို လုံးဝရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ဟာ အပေါင်းအသင်းအတွက် ဘယ်အဖိုးအခကိုမဆို ပေးချင်ကြပါတယ်။
အလွန်အမင်း အမှီအခိုကင်းခြင်းအားဖြင့် စွန့်ပစ်ခံရမှာကို ကြောက်တဲ့သူတွေဟာ အခြားသူတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုကို ခံစားနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။ သူတို့အတွက် အချစ်က ကြောက်ရွံ့မှုနဲ့ ထပ်တူကျပါတယ်။ အခြားသူတစ်ယောက်အပေါ် ချစ်ခင်ကြင်နာမှု ပိုခံစားရလေ သူတို့ရဲ့စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ လွတ်မြောက်လိုစိတ်က ပိုကြီးထွားလာလေပါပဲ။ သူတို့ဟာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို ရပ်တန့်ဖို့ ရင်းနှီးတဲ့နှောင်ကြိုးကို ဖြတ်တောက်တတ်တဲ့ လူစားမျိုးပါ။
၃။ အပယ်ခံရမှာကို ကြောက်ခြင်း
မိဘတွေရဲ့ မေးခွန်းထုတ်ခံရတဲ့၊ အမြဲတမ်းနှိမ့်ချခံရတဲ့ ကလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အဆိုးဆုံးရန်သူ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒီနည်းအားဖြင့် သူတို့ဟာ မိမိကိုယ်ကို ရှုံ့ချခြင်းနှင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်စွပ်စွဲခြင်းတို့ရဲ့ interior dialogue တစ်ခုကို တည်ဆောက်ပါတယ်။ ဒီကလေးတွေဟာ အရွယ်ရောက်လာတဲ့ဘဝမှာ သူတို့ရဲ့ ပြုမှုပြောဆိုပုံ၊ တွေးပုံတွေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ ခံစားရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်တွေကို ဖျက်ဆီးဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခုကိုသာ အမြဲရှာနေတတ်ပြီး သူတို့မှာလည်း အကျင့်ကောင်းရှိတယ်၊ အောင်မြင်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတာကို လက်ခံဖို့ သူတို့အတွက် အတော်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဟာ ချစ်ခင်မှု (သို့) နားလည်မှုနှင့် မထိုက်တန်သလို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ သူတစ်ပါးအပေါ်ထားတဲ့ သူတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဖော်ပြမှုကိုလည်း ငြင်းပယ်ပါလိမ့်မယ်။
သူတို့ဟာ လူမှုဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွေမှာ panic ခံစားရတဲ့ အထီးကျန်ဆန်သော လူကြီးတွေအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားတတ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ သူတို့ဟာ အခြားသူတွေရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို အရမ်းမှီခိုတတ်ကြပါတယ်။ အခြားသူတွေဆီက အသေးအမွှား ဝေဖန်မှုလေးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရရင်တောင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ဟုတ်/မဟုတ်ဆိုတာကို ဘယ်လိုခွဲခြားရမှန်း မသိကြပါဘူး။
တကယ်လို့ ကလေးက ပစ်ပယ်ခံရခြင်းအပြင် စိတ်သိမ်ငယ်စေတဲ့ အကျိုးဆက်တွေကလည်း ပိုလို့တောင် ဆိုးရွားပါတယ်။ ဒီသိမ်ငယ်စိတ်က မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ ဒေါသစိတ်တွေကို ချန်ထားလေ့ရှိပြီး အခြားသူတွေအပေါ် အာဏာရှင်ဆန်ဆန် ဆက်ဆံမှုကို ပြောင်းလဲစေပါတယ်။
ကလေးဘဝ တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ ဒီအမှတ်အသားတွေက ပြောင်းလဲဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ သို့သော် သူတို့ကို အပြုသဘောဆောင်တဲ့အရာအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ ဦးတည်ချက်ပြောင်းပေးလို့ မရနိုင်ဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ပထမခြေလှမ်းက သူတို့ရှိနေတယ်ဆိုတာကို အသိအမှတ်ပြုပေးဖို့ပါပဲ။
နက္ခတ်ဗေဒအရ ရာသီခွင်လက္ခဏာတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိပ်ခန်းတွေကို စုစည်းပုံ၊ အလှဆင်ပုံအပါအဝင် ကဏ္ဍများစွာကို လွှမ်းမိုးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရာသီခွင်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ အကြိုက်၊ အပြုအမှုတွေနှင့် ယုံကြည်မှုတွေကိုလည်း လွှမ်းမိုးပါတယ်။ ဒါဆိုရင် သင့်ရာသီခွင်အရ သင့်အိပ်ခန်းကို ဘယ်လိုအလှဆင်ကြမလဲ?...
ကျွန်မတို့အားလုံးက တစ်ခါတလေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဉာဏ်ရည်မြင့်မားသူတစ်ယောက်အဖြစ် မြင်ချင်ကြပါလိမ့်မယ်။ မထင်မှတ်ဘဲ ပညာသားပါသော စိတ်ကူးတစ်ခု (သို့) တောက်ပသော ခန့်မှန်းချက်တွေက ကျွန်မတို့ကို လေးနက်သော စိတ်ကျေနပ်မှုကို ပေးပါတယ်။ ဒီကနေ့မျှဝေပေးချင်တဲ့အရာကလည်း လူတစ်ယောက်ရဲ့ လျှို့ဝှက်ပုန်းကွယ်နေသော ပါရမီကို ဖော်ပြနေတဲ့ မထင်မှတ်ထားသော...
Prenatal learning ဆိုင်ရာ အသိပညာက အရမ်းကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မရှိပေမယ့် မကြာသေးခင်က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လေ့လာမှုများစွာမှာ ကလေးတွေက မမွေးခင် အမိဝမ်းထဲမှာ ဘာတွေဖြစ်ပျက်သလဲ? သင်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလား? ဆိုတာတွေကို အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဖြစ်တည်မှုရဲ့ အစောပိုင်းအဆင့်တွေကို ကျွန်တော်တို့...
ဘယ်မိဘမဆို သူတို့ကလေးတွေကို အဆုံးအစမရှိချစ်သင့်ပါတယ်။ သို့မှသာ ကလေးတွေဟာ ကြံ့ခိုင်ပြီး စွမ်းရည်ပြည့်ဝသော လူကြီးတွေဖြစ်လာပြီး ဒီလိုရက်စက်တဲ့ကမ္ဘာကြီးကို ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ ကြီးပြင်းလာနိုင်အောင် ကလေးတွေကို ပျိုးထောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်မကောင်းစရာ ကလေးတွေဟာ စက္ကန့်နဲ့အမျှ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခံနေရပါတယ်။ ကလေးသူငယ်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုဟာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကလေးငယ်ပေါင်း...